Robotka Rinjiyeynta Shiinaha HY1010A-143 Soo-saare iyo Soo-saare | Yunhua
HY1010A-143 waa 6 cirfiid robot rinjiyeynta, kaas oo si ballaaran loogu adeegsado buufinta qaybaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee warshadaha kala duwan waxayna macaamiisha siisaa xalka buufinta dhaqaalaha, xirfadleyda, tayada sare leh. Waxay leedahay wanaagga cabirka jirka oo yar, dabacsanaan wanaagsan iyo kala duwanaansho, saxnaan sare, waqti garaacis gaaban. HY1010A-143 si fudud ayaa loogu dhex dari karaa qalab taxane ah oo qalab caawinaad ah sida ujawaab, miiska slide iyo nidaamka silsiladda gudbiyaha. Xasiloonideeda iyo waafaqsan tiknoolajiyada rinjiyeynta, HY1010A-143 waxay si weyn u badbaadin kartaa rinjiga waxayna hagaajinaysaa heerka soo kabashada ee rinjiga.
HY1010A-143 waxay ku qalabeysan tahay qalab wax lagu baro buufis cusub, oo leh awood taageero luuqado badan, oo siineysa kabadhada kumbuyuutarka xakamaynta aaladaha robotka ee adeegsadaha oo leh tiknoolajiyad heer sare ah Isticmaalayaashu waxay wax ku bari karaan gacanta ama tilmaanta si ay u muujiyaan lambarka si loo gaaro baris, hawl fudud oo dhakhso leh
Dhidibka MAWL Soo noqoshada jagada Awoodda Awoodda Jawiga hawlgalka Miisaan culus Ku rakibida Darajada IP
6 10KG ± 0.06mm 3KVA 0-45 ℃ 170KG dhulka IP54 / IP65 (dhexda)
Baaxadda ficilka J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170 ° + 85 ° ~ -125 ° + 85 ° ~ -78 ° ± 170 ° + 115-140 ° ° 360 °
Xawaaraha ugu badan 180 ° / s 133 ° / s 140 ° / s 217 ° / s 172 ° / s 172 ° / s
Q1.Ma bixin kartaa aaladda Rinjiyeynta Ka-hortagga Qarax?
A. Shiinaha, ma jiraan wax summad ah oo bixin kara aaladda qarxa ee ka hortagga qaraxyada. Haddii aad u isticmaashid robot summad Shiinaha ah ranjiyeynta, dharka ka soo horjeedka ma guurtada ah waa in la xidho oo robotku wuxuu kaliya u dhaqaajin karaa waddada iyo soo-gelinta ama calaamadaha soo-saarka mashiinka rinjiyeynta
Q2.Waa maxay dharka ka hortagga maqaarka? Ma bixin kartaa?
A. Dharka ka hortagga jirka waa midka ka hortagi kara korantada ma guurtada ah. Inta lagu guda jiro howsha rinjiyeynta, waxaa laga yaabaa inay jiraan xaalado sida dhimbilo dab dhali kara, dharka noocan oo kale ah ayaa ka hortagi kara dhimbilooyinka.
Q3.Ma rakibi kartaa baaritaanka aragga robot rinjiyeynta?
A. Codsi fudud, waa caadi kormeerka aragga.
Q4.Ma bixin kartaa xalal dhameystiran oo ku saabsan arjiga rinjiyeynta?
A. Caadi ahaan isku-darkayagu wuxuu sameyn doonaa taas, annaga, soo saaraha robot-ka, waxaan ku siin karnaa mashiinka rinjiyeynta iyo robot isku xiran, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku dhaqaaqdo robot-ka jidkaaga. Xalna sii sida sheygu u keeno.
Q5.Ma waxaad na tusi kartaa xoogaa fiidiyoow ah oo ku saabsan arjiga Rinjiyeynta?
A. Hubaal, waad aadi kartaa Youtube Channel-keena, waxaa jira fiidiyowyo fara badan
Hore: Rinjiyeynta rinjiga HY1050A-200
Xiga: Raridda iyo dejinta robotka HY1020A-200